Horudhac: Inter Milan vs Verona… (Nerazzurri oo si ku meel gaar ah ula wareegi karta caawa hoggaanka horyaalka Serie A) – Gool FM
(Milano) 09 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa garoonkeeda Giuseppe Meazza ku soo dhoweynaysa caawa naadiga Verona kulan ka tirsan horyaalka Serie A-da Talyaaniga.
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 8:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Paolo Valeri (Italy)
Ciyaaryahanka kooxda Inter ee Stefano Sensi ayaa ka soo laabtay dhaawicii uu la maqnaa, isagoo badal ku soo galay kulankii Inter ay guuldarro 3-2 ka soo gaartay Borussia Dortmund bartamihii todobaadkii dhammaaday, si kastaba ha ahaatee waxa uu la maqnaa dhaawac muruqa ah.
Xiddigaha Alessandro Bastoni iyo Valentino Lazaro ayaa laga yaabaa inay booskooda safka hore ilaashadaan kuwaasoo ku soo bilowday kulankoodii ugu dambeeyey.
Kwadwo Asamoah, Roberto Gagliardini iyo Matteo Politano ayaa dhammaantood weli dhaawacyo la maqan.
Dhinaca kale kooxda Verona xiddigaheeda Koray Gunter, Marash Kumbulla iyo Miguel Veloso ayaa shaki laga galinayaa kulanka caawa oo Sabti ah, maadaama ay dhaawacyo qabaan, waxaana sidaasi darteed ay u badan tahay inay ku soo bilowdaan kulanka ay wajahayaan Inter xiddigaha kala ah; Alan Empereur, Pawel Dawidowicz iyo Matteo Pessina.
>- Inter Milan ayaa guuleysatay 10 ka mid ah 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Serie A.
>- Kooxda Inter Milan ayaa guul gaartay 10 ka mid ah 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Naadiga Verona tartammada oo dhan.
>- Inter ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 14 ka mid ah 15-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay tartammada oo dhan Naadiga Verona.
>- Kooxda Inter ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay lix ka mid ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay naadiga Verona tartammada oo dhan.
>- Inter Milan ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool afarteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Serie A.
>- Waxaa laga dhaliyay kooxda Verona in ka badan 2.5 gool saddexdii kulan ee ugu dambeeyay oo ay marti ahaayeen horyaalka Serie A.
Horudhac: Chelsea vs Crystal Palace… (Blues oo si ku meel gaar ah u geli karta kaalinta labaad ee Premier League)